+ I-17 yamagama amnandi ngolwimi lwethu | Uncwadi lwangoku
Umfanekiso -Wikimedia / Eloimanlleu
Ulwimi lwethu, iSpanish, lunobuncwane obunobuncwane obungenakho olunye ulwimi onokuziqhayisa ngalo. Ukuthetha into enye sinokusebenzisa amagama ahlukeneyo ahlukeneyo ... Mhlawumbi ngenxa yesi sizathu, kunzima kakhulu kubantu bamanye amazwe ukuba bafunde ulwimi lwethu kunye namabinzana ahlukeneyo esinawo phantse yonke into.
Namhlanje kwi Uncwadi lwangoku, Sifuna ukubonisa ulwimi lwethu kwaye siyenza ngo +17 awona magama mahle ngolwimi lwethu. Zonwabele! Sele ndinayo intanda yam kubo bonke ... Kwaye wena?
1 Ukukhethwa kwamagama amahle eSpanish
1.5 Ukutshata kwakhona
1.9 Ixesha elifutshane
2 Amanye amagama amahle eSpanish
2.3 Ukukhanya kwelanga
2.9 Ukusebenza kakuhle
2.13 Ayinakuze ibonakale
2.19 Isimbo somzimba
2.23 Imiquis yemiquis
3 Imvelaphi yeSpanish
Ukukhethwa kwamagama amahle eSpanish
Isandi esimnandi kakhulu, sithambile okanye sibuthathaka.
Into engakholelekiyo kangangokuba ayinakuchazwa ngamagama.
Ubuthathaka kakhulu kwaye ulula, into ephuma kweli hlabathi.
Isimo sengqondo sokungazichazi somtsalane wothando ngumntu omnye komnye.
Ithamsanqa nelingalindelekanga elenzeka xa ujonge enye into.
Xa amafu ajika abomvu xa ekhanyiswa yimitha yelanga.
Into ebonakalayo apho ithoni yokukhanya iyahluka ngokwakha imijukujelwa encinci.
Ubugcisa bokuthetha ngokufanelekileyo ukonwaba okanye ukuhamba.
Oko kuhlala ixesha elifutshane kakhulu.
Amanye amagama amahle eSpanish
Iyaqhubeka, ingapheli, ayinakuphumla.
Ibonisa umnqweno onamandla wento ethile ebonakalayo ukuba yenzeke.
Ipropathi yomzimba ukukhupha ukukhanya okungenamandla, kodwa ibonakale ebumnyameni.
Ukuziva ubuhlungu, ukuthamba kunye nokuchongwa kwezifo zomntu.
Ukuba ayinayo kwaye ayinakuba nasiphelo okanye isiphelo.
Isimo sokwahlulwa okanye ukubekelwa bucala ngamaxesha afezekileyo.
Amandla okulungelelanisa into ephilayo kwiarhente ephazamisayo okanye imeko engalunganga okanye imeko.
Ingacacanga, inzulu, ukuzola kunye nosizi olusisigxina, oluzelwe zizizathu zomzimba okanye zokuziphatha, ezenza ukuba abo babandezeleka yiyo bangonwabi okanye bonwabe kuyo nantoni na.
Amaqamza kulo naluphi na uhlobo lolwelo.
Ukukhanya kokuqala kwemini ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Ukukhanya okuthambileyo, okupinki okuvela kanye ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Sisenzo sokuba yinyani kwaye siyinyani kuwe. Umntu onyanisekileyo ngumntu okwaziyo ukwahlula phakathi kokulungileyo nokubi kwaye asebenze kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla ebakhokelela ekubeni bathobele "izithethe" zoluntu.
Ungumntu onganikeli kwinto emphambukisayo kwindlela yakhe. Inokusetyenziswa nakwiindawo.
Ungomnye wamagama amnandi kwisigama saseSpain kuba ikwangoyena mntu simthanda kakhulu ebomini bethu. Nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba iqondwe njengo "mfazi ozala umntwana", kuba oomama abaninzi ngabantwana babo nokuba ababazalanga.
Ithetha ngokunika umntu into efanayo naleyo sinikwe yona ngulomntu. Owona mzekelo ubalaseleyo kule meko inokuba luthando, kuba phakathi kwezithandane uthando kunye nothando yinto ephindaphindanayo.
Igama elithi Saudade lithetha ukulangazelela, kwaye linxulumene nelivo. IRoyal Academy yoLwimi lwaseSpain (RAE) iyichaza "njengesizungu, ukulangazelela, ukulangazelela." Nangona kunjalo, ingaphezulu koko.
Nangona isetyenziswa eSpain (incinci kakhulu kuba ayaziwa), ligama lesiPhuthukezi, kwaye eneneni imvelaphi yalo (kunye nelivo) inento yokwenza namaPhuthukezi, awayeyisebenzisa xa babekwelinye ilizwe hayi yayingeyabo kwaye babekhumbula ikhaya labo kunye nabantu ababathandayo.
Elinye igama elithi "iSpanish" liya kuba "morriña" ukuchaza into efanayo.
Ithemba sisimo sengqondo, imvakalelo ekwenza ungalahli ukholo lokuba into oyikhangelayo izakwenzeka. Okanye uthembe umntu (okanye isenzo) ukuba ube nesiphumo esifunekayo.
Ligama elaziwayo, nangona kunjalo, lisetyenziswa kwiSpanish. Ngoku, intsingiselo yayo yile yokuba "ucocekile okanye ukhululekile kwizinto ezingafunekiyo." Ingxaki kukuba abantu abaninzi abancinci bayisebenzisa ngenye indlela, ngegama elithi "mna mondo", elinokuthi lithethe into efana nokuhleka ngokungafihlisiyo kwinto ethile.
Yinzame, nokuba kukuhamba okanye lilungu lomzimba, ukufuna ukwenza into. Kodwa ngaphandle kokwenza.
Ngokwe-RAE, kukuzinza, kulula, ububele kunye nokunyaniseka, nokuba kukwimo kunye / okanye kukuziphatha. Nangona ingelilo igama leSpanish eli-100%, kuba livela kwisiFrentshi, lisetyenziswa eSpain.
Imvelaphi yaseGrisi, ligama elichaza umntu ophuphayo kodwa aqonde inyani.
Eli gama lithetha ukungabikho, ukuzola. Iqokelelwe kwi-RAE kwaye ivela kwi-Greek.
Umntu onengqondo encinci ngumntu okoyikayo ukwenza into ethile, kodwa ezingabalulekanga, kwaye abanasizathu sakubakho.
Wakhe wancanywa? Ngokuqinisekileyo uyakwenza, kuba kuthetha ukwanga kothando okanye imbeko. Ngapha koko, kumaxesha amandulo eli gama lalisetyenziswa ngokubanzi, kwaye livela kwisiLatin, osculum.
I-Trabzon ineentsingiselo ezininzi ekufuneka uyazi. Kwelinye icala, kufana kakhulu "nobubi" obunokuba njalo. Kukulwa ngamazwi okanye ngezenzo (umlo oqhelekileyo ngamazwi amakhulu). Kodwa ikwanayo nentsingiselo entle ngakumbi. Kwaye yile, enxulumene nolwandle, yinto ebizwa ngalo mzuzu xa amaza amancinci ewela kumacala ahlukeneyo kwaye avelise isandi esinokuviwa mgama.
I-Acme siyayazi ikhitshi lophawu oluvela kwiikhathuni. Kodwa i-acme, evela kwisiGrike, yamkelwe yi-RAE kwaye iza kuthetha ukuba lixesha lesifo, okanye ixesha elifikelela esiphelweni lomntu.
I-Jipiar ithetha ukuba yi-hiccup, ukugcuma, ukukhwina; Oko kukuthi, sithetha ngesenzo sezo zenzi. Kodwa inokuthetha ukucula ngelizwi elifana nokugcuma.
Kukangaphi bekuxelela ukuba "amaqanda" ahamba no-h kunye no-v. Kwaye baya kuyiphawula kangaphi bengazi nokuba kukho igama, ukuba livela kwisiLatin, kwaye libhaliwe ngaphandle kwe-h kunye no-b. Ewe ewe, i-uebos ikhona. Ingxaki kukuba ayithethi into efanayo naleyo yangaphambili, kodwa ibhekisa kwimfuno.
Eli gama lingaqhelekanga lithetha ukuba nobukrelekrele, ubuchule, kunye nobubi ebomini. Oko kukuthi, umntu owaziyo ukujongana nobomi bonke ngendlela eyimpumelelo.
IsiSpanish senziwe ngamagama angamawaka. Ngokukodwa, kwi-RAE ngaphezulu kwamagama angama-93.000 ayaqatshelwa (unyaka ka-2017), kwaye unyaka nonyaka amagama amatsha afakiwe (nangona uninzi luye lwanyamalala).
Bambalwa kakhulu abayaziyo imvelaphi yeSpanish, okanye isiCastilian, kunye namagama ayenzileyo. Kodwa oko siza kusombulula ngokulula.
Kwaye oko Siyazi ukuba iSpanish sivela kwisiLatin, njengoko kunjalo ngesiPhuthukezi, isiCatalan, isiGalician, isiFrentshi, isiTaliyane okanye iRetro-Roman. Njengoko usazi, iRoma yoyisa uninzi lweSingasiqithi saseIberia kwaye, xa obu bukumkani bawayo, nangona isiLatin sasilahlekile, eneneni okwenzekileyo Yaguqulwa yaba lulwimi olutsha, ekuthiwa yi «Castilian romance», eyandayo isuka eBukumkanini baseCastile yaya kulo lonke usingasiqithi kumaXesha Aphakathi.
Ngokwenyani, kulapho iSpanish ivela khona, ukusuka kwisiLatini esingcolileyo, eyayilahlekile njengoko uBukhosi baseRoma babunyamalala kumazwe aseSpain. Nangona kunjalo, yayingenguye "isiLatin" kuba ikwamkela amagama aphuma kwezinye iilwimi, ikakhulu isiGrike, isiJamani, okanye isiCelt.
Ngokwenene Ulwimi lwaseSpain luqale ngonyaka we-1200 kwaye lityala uKing Alfonso X, owathi phantsi komyalelo wakhe waqalisa ukubhala imisebenzi ngesiCastilian, ukongeza ekuguquleleni abanye abaninzi kolo lwimi lwesiSpanish, oko ke kunceda ekwenzeni isiCastilian ulwimi "olusemthethweni" lwaseSpain.
Inyani yile, ukuba sijonga ngasemva, amagama amaninzi amadala esiSpanish alahlekile ngenxa yokusetyenziswa gwenxa, amanye amaninzi ayiqhelekanga kuthi, kwaye ngamanye amaxesha sisebenzisa amagama anentsingiselo echasene ngokupheleleyo nale sifuna ukuyithetha. Esinika umbono wokuba sintsonkothe ​​kangakanani iSpanish.
Leliphi kula magama olithandayo? Ngaba unayo enye engekho kolu luhlu kwaye uthanda okungakumbi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » + 17 awona magama amnandi kulwimi lwethu
UJairo rodriguez sitsho
Ndiyabulisa, ndinombulelo omkhulu ngenqaku. Ixabiso, nangona iphindaphindeka kwiwebhu (ubuncinci inxenye yokuqala, awona magama ma-10 mahle).
Ndithatha inxaxheba kula magqabantshintshi, ngenxa yesizathu esithile, ndililwimi kwaye ndinoxanduva lobungcali lokuba negalelo lento kwabanye ngokubhekisele kwingingqi yam. Kulungile, sithandwa sikaCarmen, ndicebisa ngentlonipho enkulu ukuba wenze isichaso kupapasho lwakho, ngegama elikhethekileyo, ligama elithi "limerencia", ekungekho kuvunywa kobukho balo kulwimi lwaseSpain, ngokuchaseneyo ushicilelo kwiwebhu, apho kuye kwakho iinguqulelo ezimbi kulwimi lwesiNgesi nalapho kucingelwa khona igama lemvelaphi, elithi "limension" nelikhankanywe kuphela kwisayikholojhe kwaye akukho nto yimbi, enje nokuba iDikshinari yoLwimi lwaseSpain , kwaye ayichazi ukuyichaza njengesichazi-magama; Oku kuthetha ukuba ayiyonxalenye yolwimi lwesiSpanish phantsi kwazo naziphi na iimeko zolwimi, kodwa icaciswa ngokugqithileyo kumaphepha amaninzi ewebhu ngenqaku olipapashileyo.
Ukuqukumbela, igama elithi "limerencia" aliyonxalenye yolwimi lwaseSpain, kuba alikhange liqulunqwe nangayiphi na ingcali kulwimi, kungasathethwa kangako kwi-DLE. Ayisiyonto iyodlula igama eliguqulwe ngokungafanelekanga ngomnye umsebenzisi kwiwebhu (kubandakanya umbhali wenqaku elikwiWikipedia).
Ndicela ke ukuba uluvo lwam lungaqwalaselwa njengebango okanye isenzo sokuzikhukhumeza, kodwa njengengcebiso evela kumntu ophila ngolwimi.
Phendula kuJairo Rodríguez
URicardo Medina sitsho
Phendula uRicardo Medina
ULuis Duque sitsho
Ukongeza kumagqabantshintshi kunye nentlonipho kaJairo Rodríguez, phantse kungumsebenzi ukuqaphela ukuba amanye amagama aboniswe kwinqaku, njenge-Resilencia, ayinjalo, kodwa kunokuba kubhalwe ukomelela kubhaliwe ...
Phendula uLuis Duque
Ndicinga ukuba kukho igama elingapelwe kakuhle.
Kukomelela, hayi ukomelela. Ileta ndilahlekile. Okanye ndicinga njalo.
Imibuliso kunye nombulelo ngokwabelana ngale ndawo.
UMarc Moreno sitsho
Iposi elungileyo kakhulu, ndiyavuyisana nawe, nangona kunjalo, ndiyazivumela ukuba ndenze umbono, into echanekileyo kukuQiniseka, hayi uKomelela, njengoko kuchaziwe apha; Ngaphandle kwalonto, upapasho lutyebisa kakhulu.
Phendula uMarc Moreno
Igama endilithandayo ngu-nefelibata, ewe, ndiyindoda ephuphayo ehlala ikhubeka kwinyani ...
UYulieth Correa sitsho
Xa ndilifunda eli nqaku, ndingatsho ukuba nangona lineziphene ezithile ngokwenkcazo okanye ekubhalweni kwamanye amagama, kufuneka kuqatshelwe ukuba ngumsebenzi olungileyo; Ngakolunye uhlangothi, ndandilithanda kakhulu igama elithi SAUDADE, ekubeni, ngokuba ligama lesiPhuthukezi ngaphezu kweSpanishi, ndachukunyiswa yinto yokuba ifakwe kwinqaku, eyandikhokelela ekubeni
funda kwaye ujonge ngakumbi ngayo.
Phendula kuYulieth Correa